सोचेभन्दा धेरै खतरनाक छ कोरोना, यसरी अचानक बनायो शारीरिक अशक्तता ! - NA MediaNA Mediaसोचेभन्दा धेरै खतरनाक छ कोरोना, यसरी अचानक बनायो शारीरिक अशक्तता ! - NA Media
सोचेभन्दा धेरै खतरनाक छ कोरोना, यसरी अचानक बनायो शारीरिक अशक्तता !
कोरोना भाइरसको महामराी सारा विश्वमा नै तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ ।
वैज्ञानिकहरु कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सीन बनाउन अहोरात्र खटिएपनि अहिलेसम्म पूर्ण सफलता हात लाग्न सकेको छैन ।
यसैबीच अमेरिकाको लस एन्जिल्समा बस्ने एक व्यक्तिलाई कोरोनाले शारीरिक अशक्तता बनाएको छ । ग्रेग गारफील्ड नामका ति व्यक्ति संक्रमित भएको दुई महिनासम्म अस्पतालमा रहेका थिए । उपचारको बेला उनले गम्भीर समस्याहरु झेल्नुपर्यो ।
उनका हातको औँला समेत काट्नुपरेको छ । ५४ वर्षका उनी भन्छन्, ‘जब कोरोना उनको देशमा फैलिन शुरु भयो, म त्यहि बेलाबाट नै संक्रमणको चपेटामा परेको थिएँ, म इटाली साथीहरुसँगै घुम्न गएको थिएँ, त्यहाँबाट फर्किएको केहि दिन पछि म बिरामी भएँ । परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पाइयो, म मात्र होइन, मसँग गएका साथीहरु पनि संक्रमित भए ।’
अमेरिकाको एक अस्पतालमा उनलाई कोरोनाको पहिलो संक्रमितका रुपमा भर्ना गरिएको थियो । भर्ना पछि दोश्रो दिननै उनको अवस्था जटिल बन्दै गयो र उनलाई भेन्टिलेटरमा राखियो । डाक्टरले पनि उनी बच्ने अनुमान जम्मा एक प्रतिशत मात्र गरेका थिए ।
ग्रेगको फोक्सोमा गम्भीर समस्या हुनुका साथै सेप्सिस र किड्नी तथा लीभर फेल भएको समस्यासँग लड्नुपर्यो ।
उनलाई ठीक हुन ६४ दिन लाग्यो । ति मध्ये ३१ दिन उनी भेन्टिलेटरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्इमहरले बताएका छन् । र अन्त्यमा ८ मेमा उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए । तर त्यो बेलासम्म उनको जीवन परिवर्तन भईसकेको थियो ।
उनी साधारणबाट शारीरिक अशक्ततामा परिणत भएका थिए । उनका दुबै हातका औँला कोरोनाका कारण काट्नुपरेको थियो ।
रक्तप्रवाहमा समस्या भएकोले उनको औँला काट्नुपरेको डाक्टरले बताएका छन् ।
Gallery image with caption: यी हुन् २०० भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला
Gallery image with caption: धूमपान गर्ने व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा
Gallery image with caption: सङ्क्रमितमा लक्षण देखिन थाले
Gallery image with caption: विदेशबाट आएका सबैको कोरोना परीक्षण हुने
Gallery image with caption: नेपालमा कोरोना निको हुने बढ्दै, ६५ प्रतिशत संक्रमणमुक्त
Gallery image with caption: कोरोनाको पहिलो आक्रमण फोक्सोमै किन? कसरी नष्ट गर्छ फोक्सो?